देउवाले भने-कम्युनिस्टविरूद्ध बोल्नुस्, मविरूद्ध त बोल्न पाइहाल्नुहुन्छ नी - Dainik Nepal
देउवाले भने-कम्युनिस्टविरूद्ध बोल्नुस्, मविरूद्ध त बोल्न पाइहाल्नुहुन्छ नी
दैनिक नेपाल २०७५ जेठ ३० गते ६:४४
काठमाडौं, ३० जेठ । सरकारको कार्यशैलीविरूद्ध सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा. शशांक कोइरालासहितका नेताहरू आक्रमकरूपमा प्रस्तुत भएका छन् । मंगलबार नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनीहरू सरकारको कार्यशैलीप्रति चर्को विरोधमा उत्रेका हुन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सरकारले समृद्धिको सपना बाँडे पनि बढ्दो महंगीले त्यसलाई गिज्याएको आरोप सभापति देउवाले आरोप छ । ‘बजारमा महंगी दिनदिनै बढेको छ । तर, सरकारले देशमा समृद्धि ल्याउने आश्वासन बाढिरहेको छ । महंगी बढाएर कसरी समृद्धि आउँछ ?’ देउवाले भने, ‘अब त महंगीविरुद्ध आन्दोलन नै गर्नुपर्ने जस्तो भइसक्यो ।’
नेता रामचन्द्र पौडेल पनि सरकारविरूद्ध नै खनिए । ‘संविधानमा सभामुख र उससभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि एउटै पार्टीभएपछि कम्युनिष्ट पार्टीले नछोड्ने संकेत गरिरहेका छन्’ पौडेलले भने, ‘संविधान विपरित प्रदेश प्रदेशमा प्रधानमन्त्रीले दुई तीन घण्टा भाषण गर्ने शैली पनि राम्रो भएन ।’
उनले बहुमत भएको सरकारले दुई तिहाईको लागि मरिहत्ते गर्नुलाई पनि उनले शंकाको नजरले हेरे । ‘सरकार चलाउनका लागि प्रष्ट बहुमत हुँदैहुँदै अनायासै दुई तिहाईको लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ’ पौडेलले भने, ‘दुई तिहाईको प्रयस रहस्यमयी र शंकास्पद छ । यो खराब नियतविरूद्ध कांग्रेसले खबरदारी गर्नुपर्छ ।’
उससभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारबाट संघीयता, लोकतन्त्र र संविधान विरोधी काम भइरहेको भन्दै पार्टीले खबरदारी गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले एकतावद्ध कांग्रेस हुँदामात्र कम्युनिष्टसँग लड्न सकिने बताए । नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि सत्तारूढको भन्दा प्रतिपक्षी कांग्रेसको दृष्टि टाढा हुनुपर्ने बताए । ‘संविधान कार्यान्वयन गर्नेदेखि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नका लागि सरकारको नियत राम्रो छैन’ सिटौलाले भने, ‘प्रतिपक्षीकारूपमा कांग्रेसले सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्छ । तर, हामी सुस्ताएका छौँ । यसरी हुँदैन, चल्दैन ।’
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले दुई तिहाईको बलमा संसदीय व्यवस्था नै मास्नेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा लाने षडयन्त्रविरूद्ध कांग्रेसले सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने जिरह सुनाए । नेता गगन थापाले सरकारका राम्रा काममा सहकार्य र गलत कामप्रति संघर्षको नीति लिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्ने सबै नेताहरुले सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको हितसँग ट्रेड युनियनको आन्दोलनलाई जोड्नुपर्ने बताए । श्रमिकका हित हुने विषयलाई नजोडेसम्म ट्रेड युनियन सान्दर्भिकता बढ्दै जाने बताए ।